China Metal prototype Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Metal prototype inogara ichiitirwa mainjiniya kuti vaone kugadzirwa kwechigadzirwa kana muchina. Mestech inopa simbi prototype kugadzira kwevatengi.
Metal prototypeinogara ichiitirwa mainjiniya kuti vaone kugadzirwa kwechigadzirwa kana muchina. Mestech inopa simbi prototype kugadzira kwevatengi.
Simbi simbi inowanzo shandiswa kugadzira chaiyo zvikamu uye zvishandiso mateko, uye anodhura kupfuura aya epurasitiki zvikamu. Kuti uvandudze dhizaini uye udzikise njodzi, zvinodikanwa kuti uite mhando dzekuenzanisira dhizaini uye kugadzirisa maitiro kusati kwagadzirwa zviri pamutemo.
Zvikamu zvesimbi zvinoshandiswa zvakanyanya mumakina akasiyana siyana nemidziyo. Ivo anowanzo shandiswa kugadzira chaiwo zvikamu nekuda kwavo kweyakaenzana kugadzikana, simba uye kuomarara, yakakwira uye yakaderera tembiricha hunhu uye magetsi conduction, ayo ari akakwirira kupfuura epurasitiki zvikamu.
Inofananidzwa nemapurasitiki zvikamu, kune akawanda marudzi ezvigadzirwa zvesimbi zvikamu, senge aruminiyamu chiwanikwa, mhangura chiwanikwa, zinc chiwanikwa, simbi, titanium chiwanikwa, magnesium chiwanikwa uye zvichingodaro, aine akasiyana ehupfumi. Pakati pavo, ferroalloys, aluminium alloys, alloys emhangura uye zinc alloys anonyanya kushandiswa mumaindasitiri uye ehurumende zvigadzirwa. Izvi zvinhu zvesimbi zvine akasiyana epanyama uye emakemikari zvivakwa, uye iyo yekugadzirisa tekinoroji yesimbi zvikamu zvine akasiyana masisitimu uye maumbirwo zvakatosiyana.
Sekureva kweshoko uye chimiro chezvikamu, kune akawanda marudzi ehukuru kugadzirwa kwekugadzira masisitimu esimbi zvikamu, sekucheka, kufa kukanda, kuvharidzira, kukweva, kukotama, extrusion uye sintering. Kune iyo yekufa-kukanda, kuvharisa, extrusion uye sintering, izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa. Iforoma inowanzoreva kudhura kwekudyara kukuru, saka michina yekucheka inowanzo shandiswa yavo prototype kugadzira
Pane matatu makuru maitiro ekugadzira simbi prototype sampuli:
Inonyanya kushandiswa kwezvikamu nehurefu hwenzvimbo uye zvidiki zvikamu.
Huru midziyo ndeye CNC yekugaya muchina, lathe, grinder, EDM, WEDM uye zvimwe zvishandiso zvemuchina.
Zvekugadziriswa kwendege, pamusoro, paburi uye paburi re ekisero, ruoko, diski, cuboid uye yakakomberedzwa pamusoro simbi zvikamu.
Yakakosha mashandisirwo emuchina maturusi anoshandiswa kugadzirisa zvikamu neakanyanya kunyatsoita zvinodiwa. Zvikamu zvakaita semagiya, sikuruu tsvimbo, nezvimwe.
2. Sheet kugadzira simbi
Yegobhu uye yekuvhara masampuli ane mutete mudhuri uye hwakaenzana ukobvu kwese kwese, jira simbi maitiro inowanzo shandiswa, ndokuti, pachishandiswa laser yekucheka muchina uye zvimwe zvakapusa zvigadziri kana maturusi kuburikidza nekukombama, kucheka, kutsika-tsika uye kupwanya. Izvo zvinowanzoenderana neyakagadzirwa kugadzirwa.
Semuenzaniso, dzimba dzemotokari, chassis yemakomputa, nezvimwe.
3. Surface Post-kurapwa
Mushure mekugadzirisa kana pepa simbi yekugadzirisa, izvo zvakakosha dhizaini zvimiro uye maumbirwo anowanikwa. Kuti uwane yakanaka yepamusoro yepamusoro uye chitarisiko, kurapwa kwepamusoro kunowanzodiwa.
A. Pamusoro kupedzisa: kukuya, kupukuta, kutumira mameseji, kuveza laser uye embossing.
B. Kupoda poda, electroplating, oxidation uye pendi
Aluminium CNC machine prototypes
Nemazvo machine psac simbi kumumvuri
Stainless simbi jira prototypes
Iko kuomarara kwakanyanya, kwakanyanya kusungunuka tembiricha mapoinzi hunhu uye yakanyanya kunyatsoita zvinodiwa nesimbi zvinhu zvinogadzirisa yavo yekugadzira tekinoroji yakasiyana neiyo isiri-yesimbi zvinhu (senge mapurasitiki) mukugadzira prototypes kana sampuli. Kambani yedu inopa vatengi huwandu hwakazara hweimwe-inomira prototype kana mockup yekugadzira uye sevhisi, kusanganisira epurasitiki zvikamu, silica gel zvikamu, simbi zvikamu nezvimwewo. Kana iwe uchida iyo, tapota taura nesu.
Pashure: Insert Kuumbwa
Zvadaro: Plastic muforoma kuti Laser bvudzi rokubvisa muchina
3d Metal Kudhinda Prototype
Simbi yekushandisa simbi
Simbi yekudonha Chikamu Prototype
Prototype Sheet Simbi Zvikamu